Juventus oo Badisay iyo Inter Milan oo Laga Badiyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Juventus oo hogaamineysa horyaalka talyaaniga ayaa galabta garoonkeeda Juventus Stadium 2-0 uga badisay kooxda ChievoVerona.
Kooxda Juventus ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta dhalisay labada gool,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Paul Pogba iyo Stephan Lichtsteiner.
Kooxda Juventus ayaa hada sideed dhibcood ka sareysa kooxda Roma oo kaalinta labaad ku jirto,waxana ay leedahay 49-dhibcood,halka kooxda ChievoVerona ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Roma oo kaalinta labaad horyaalka uga jirto ayaa caawo la ciyaareyso kooxda Fiorentina.
Kooxda Sampdoria ayaa garoonkeeda Luigi Ferraris barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Palermo.
Ciyaaryahan Samuel Eto’o oo 33-jir ah shalayna ku soo biiray kooxda Sampdoria ayaa daawanayay ciyaarta.
Kooxda Sampdoria ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii lixaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Citadin Martins Eder,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Franco Vazquez ayaa bilowgii qeybtii danbe ee ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda Palermo.
Garsoorihii ciyaarta Angelo Cervellera ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta kooxda Palermo kaarka casaanka ah ka siiyay ciyaaryahaan Andrea Fulignati.
Kooxda Sampdoria ayaa kaalinta afaraad uga jirto horyaalka talyaaniga,waxana ay leedahay 34-dhibcood,halka kooxda Palermo ay horyaalka uga jirto kaalinta sideedaad,iyadoo leh 27-dhibcood.
Kooxda Inter Milan ayaa waxaa garoonkeeda San Siro 0-1 uga badiyay kooxda Torino.
Labada kooxood ayaa is-mari waayay ilaa dhamaadkii ciyaarta.
Ciyaaryahan Emiliano Moretti ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Torino.
Kooxda Inter Milan ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 26-dhibcood,halka kooxda Torino ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 25-dhibcood.
Madaxweynaha Dalka Turkiga iyo wafdigii uu hogaaminayay oo ka dhoofay garoonka Aadan Cadde